Qorshaha Shanta Sanno ee Wasaaradda Waxbarashada Somaliland | Togdheer News	Home
Connect on Facebook	6:31 pm | Posted by kayse Qorshaha Shanta Sanno ee Wasaaradda Waxbarashada Somaliland
Hargeysa (Togdhnews)- Shir la-xidhiidha qorshaha shanta sanno ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa ka furmay shalay hudheelka Ambassador ee magaalada Hargeysa.
Kulankan oo socon doona muddo laba maalmood ah, lana filayo in Isniinta maanta la soo gunaanado, waxa ka qaybgalay hay’adaha caalamiga ah ee la shaqeeya Wasaaradda Waxbarashada, Guddida Tacliinta Sare, Wasiirka Warfaafinta iyo dhammaanba bahda waxbarashada, qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha jaamacadaha kala duwan ee dalka iyo Drs. Edna Aadan Ismaaciil oo ka mid ah haweenka aqoonyahanka ee reer Somaliland, iyadoo wasaaraddu halkaas ku soo bandhigtay qorshe shan sannadood ah oo ay u dejisay horumarinta waxbarashada waddanka.
Shirkan waxa si weyn loogu lafa-guray qaab-dhismeedka, hadafka laga leeyahay qorshan shanta sannadood iyo muhiimadda uu u leeyahay waxbarashada Somaliland.
Wasiirka Waxbarashada Marwo Samsam Cabdi Aadan oo halkaas ka hadashay, ayaa ku boorrisay ka qaybgalayaasha kulan-hawleedkaas ay soo bandhigaan wax kastoo wax-ka-beddel u baahan si fursaddan looga faa’iidaysto.
“Waxaan leeyahay shirkeenani ha noqdo mid Ilaahay ina waafajiyo talada wanaagsan, maadaama ay joogaan maanta aqoonyahannadii jaamacaduhu, waxaanan is-leeyahay qorshe midho-dhal ah ayaa soo bixi doona. Waa inaynu ka faa’iidaysana qorshahaas shanta sannadood,” ayey tidhi Samsam Cabdi Aadan.
Wasiirka Warfaafinta iyo Wacyigelinta Md. Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale (Boobe), ayaa ku baaqay in qorsha cusub ee Wasaaradda Waxbarashadu diyaarisay uu noqdo mid la jaan-qaadaya qorshaha guud ee qaranka Somaliland.
“Qorshani wuxuu muhiimad gaar ah innoogu leeyahay waa mid aynu innagu leenahay, waana qorshe isku xidhan oo ay tahay in wasaaradaha kale la jaan-qadaan, haddaanay la jaan-qaadina waa hal bacaad lagu lisay. Si uu barnaamijkan u noqdo mid dhab ah oo hirgala waa inuu qorshaha qaran la jaan-qaado, cidda loogu talogalay inay barbaariso maskaxda qarankuna waa Wasaaradda Waxbarashada,” ayuu yidhi Wasiir Boobe.
Masuuliyiin ka socday hay’adaha caalamiga ah iyo aqoonyahanno kale oo furitaankii kulan-hawleedkaas ka hadlay, ayaa dhammaantood qorshaha san-sannadoodka ee Wasaaradda Waxbarashada Somaliland diyaarisay mid muhiimad weyn u leh horumarka tacliinta dalka.